पारस सरकारलाई बिहे गरौँ भन्दा ‘यो हुन सक्दैन’ भनेपछि मर्नलाई पासो लगाएँ (भिडियो) – Nep Stok
पारस सरकारलाई बिहे गरौँ भन्दा ‘यो हुन सक्दैन’ भनेपछि मर्नलाई पासो लगाएँ (भिडियो)
फागुण २, २०७८ सोमबार 461
सोनिका रोकायले पूर्व युवराज पारस शाहसंगको प्रेमका बारेमा खुलाएकी छन् ।
उनले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो मनमा प्रेम उब्जिएको र पारससंग विवाहको प्रस्ताव राखेको बताएकी छन् ।
पारससंग संगै हिड्दा आफुहरुको सम्बन्धलाई लिएर मानिसहरुले धेरै कुरा गरेको भन्दै आफुले पारससंग विवाहको प्रस्ताव राखेको सोनिकाले स्वीकार गरेकी छन् ।
उनले भनिन् मलाई पारसले परिवर्तन गराउनुभयो । पहिलाको सोनिकावाट अहिलेको सोनिका बनाउनुभयो । तर उहाँले मलाई एक चेलीको रुपमा हेर्नुहुँदो रहेछ । मेरो मनमा पाप पलायो । मैले नै पारसलाई मलाई बिवाह गर्नु भनेँ । तर पारसले यो हुन सक्दैन भन्नु भयो । त्यो कुरा मैले सहन सकिन । आफुलाई ५ दिन सम्म कोठामा थुनेर राखेँ ।
उनले त्यतीबेला पनि आफुलाई बचाउन पारसले निकै सहयोग गरेको बताएकी छन् । कोठामा आफुले देह त्या ग गर्ने कोशिष पनि गरेको उनले बताएकी छन् । त्यो ५ दिन म कसरी बसें त्यो मलाई नै थाहा छ । तर अहिले मैले आफुलाई बुझेकी छु ।
म गलत थिए । सोनिका राजसंस्थाको पक्षमा खरो उत्रिएकी छन् । उनी कोरोनाको जोखिम सुरु भएसंगै आफ्नो गृहजिल्ला बझागं पुगिन् । पारस विरामी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि निकै भावुक भएकी सोनिकाले फेरी एक पटक राजनीति कुरा गरेकी छन् । उनले पारसका बारेमा निकै बखान गरेकी छन् । उनले राजतन्त्र नै सकिएपछि उनका बारेमा नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, उहाँ पागल भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । त्यत्रो राजसंस्था जाँदा उनमा के बितेको थियो होला ? कुनै मानिस प्रेममा धोका खाँदा त कति दुखी हुन्छ भने त्यती धेरै वर्ष राज गरेको राजतन्त्र जाँदा कस्तो भयो होला ? तर त्यो भावना कसैले बुझेन ।
Prevहिउँ खेल्नएका दुई किशोर ११ दिनपछि मृत अवस्थामा फेला
Nextकलंकीमा डिउटीमा रहेका ट्राफिकलाई बसले ओरभट्याक गर्ने क्रममा बसले ठ’क्क’र दिएपछी हंगामा !
थप अनुशन्धानको लागि भन्दै तनहुँबाट नवलपुरको गैँडाकोट लगियो पल शाहलाई
साउदीमा २२४ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाए दया छ भने Rip लेख्नुहोस
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर २९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
अब देशभरी पेट्रोल देशभरी नपाइने?भर्खरै आयो यस्तो खबर। (3959)